Qarax dhimasho iyo dhaawac sababbay ayaa ka dhacay Hotelka Central ee Muqdisho – Radio Muqdisho
Qarax dhimasho iyo dhaawac sababbay ayaa ka dhacay Hotelka Central ee Muqdisho
Allaha u naxriistee Xildhibaan Cumar Cali Nuur (Cumar Furdug),Guddooomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee dhanka Siyaasadda Maxamed Aadan Guuleed (Caane Geel) iyo ayaa maanta ku geeriyooday qarax duhurnimadii maanta maleeshiyaad ka tirsan Al-shabaab ay la beegsadeen Hotelka Central oo kamid ah Hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho.
Mas’uuliyiintan geeriyootay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxaa ay salaadda Jimcaha ku dukanayeen Misjid ku yaala gudaha Hotelka maleeshiyaadka Al-shabaab ay qaraxyada la eegteen.
Wararka ayaa waxaa ay intaa ku darayaan in Xildhibaan C/qaadir Cali Cumar oo kamid ah mudaneyaasha Baarlamaanka Soomaaliya oo kamid yahay dadka ku dhaawacmay qaraxa maanta Muqdisho ka dhacay, sidoo kale siyaasiga Salaad Cali Jeelle ayaa la soo sheegayaa in dhaawac fudud oo ka soo gaaray.
Tirada dhimashada iyo dhaawac ee qaraxa maleeshiyaadka Al-shabaab ay maanta la beegsadeen dadka gudanayay waajibaadka Salaadda Jimcaha ayaa ilaa iyo hadda aan la xaqiijin.
Hoteelka qaraxa uu ka dhacay ayaa hadda waxaa ku sugan Wasiirka Amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya iyo saraakiisha Ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya iyadoo amaanka goobta qaraxa uu ka dhacay ay si aad ah u adkeeyeen laamaha Amaanka ee dowladda Soomaaliya.
Wixii warar ah oo ku soo kordha qaraxa waad la socon doontaan insha’alah.